Waa Maxay Bridge Financing? – Idil News
Waa Maxay Bridge Financing?
Marka shirkad (Dawlad) ay u baahan tahay maal gelin deg deg ah (short term financial obligation for working capital), isla markaasna ay filayso in ay hesho lacag maalgelin ah oo muddadeedu dheer tahay (secure long term investment/loan), laakiin aan hadda la heli karin laakiin la hubo (approved) in la heli doono muddo dhow ka dib (e.g. 1 sano, 6 bilood ka dib), waxay qaadataa deyn ay kusii buuxiso mudda ay lacagta sugeyso (bridging the gap). Deynta noocaan ah waxaa la yiraahdaa “Bridge Loan”, waxaana lagu qaataa Ribo dulsaarkeedu aad ku badan yahay sida 20% interest – maxaa yeelay mudda ayaa yar. Maalgelinta noocaan ahna waxaa la yiraahdaa “Bridge Financing”.
Norway waxay sheegtay in Somalia ay weydiisatay “Bridge Loan” ka badan NOK 3 Billion oo ku dhow USD 300M! Lama oga dulsaarka Ribada ay rabto!!
World Bank wuxuu qiray in lacag ka badan USD 365M Soomaaliya ay ku bixisay “Bridge Loan”
Dr. Maxamuud C/Raxmaan.